Sidee hoos loogu dhigaa iOS 9 ilaa iOS 8.4.1 | Wararka IPhone
Sida hoos loogu dhigo iOS 9 ilaa iOS 8.4.1 oo lala socdo OdysseusOTA 2.0
Waxaan hadda helnay warar aad muhiim ugu ah bulshada Jailbreak. Inbadan oo idinka mid ah waad ogtahay, Apple waxay joojisay inay kudhaxeyso saxiixida macruufka 8.4.1 in mudo ah, markaa macquul ma aheyn in hoos loo dhigo iOS 9 ilaa iOS 8.4.1. Sidaa darteed, haddii aad ku jirtay macruufka 9 oo taleefankaagu uusan u fulin sidii la rabay, ama aadan ku faraxsanayn nooca cusub ee macruufka sabab kasta ha noqotee, wax ikhtiyaar ah uma lihid inaad ka samirto mooyee. Si kastaba ha noqotee, dhibaatadani way dhammaatay iyada oo ay ugu wacan tahay OdysseusOTA qaybteeda 2.0, hadda waxaan dib ugalaaban karnaa macruufka 9 / 9.0.2 nooca ugu dambeeyay ee iOS 8, nooca macruufka 8.4.1.
OdysseusOTA nuqulkeedii hore waxay noo ogolaatay inaan ka soo laabanno macruufka 8 ama macruufka 7 nidaamka ugu fiican ee illaa iyo hadda, nooca 6.1.3, iyada oo aan loo baahnayn in SHSH la kaydiyo. Waqtiyadu way isbadaleen, waana ku faraxsanahay in nuucaan cusub uu udhaxeeyo macruufka 8 iyo iOS 9, waxaa jira kuwa badan oo dib ugu noqonaya sabab kasta ha noqotee, xorriyadda ayaa ah sababta Jeelka loo raro, waana sababta kor u qaadeysa suurtagalnimada hoos loogu dhigayo nidaamka qalliinka.
Nasiib darrose taasi macquul uma ahan dhammaan aaladaha. IPhone-yada la jaanqaadaya OdysseusOTA waa iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 4s iyo iPhone 4, iyo sidoo kale iPad 2 iyo iPad 3. Runtii waan ka xunnahay haddii aad haysato qalab ka sarreeya kuwan oo aad rabto inaad hoos u dhigto, laakiin suurtagal maaha. Si kastaba ha noqotee, runti maahan wax la fahmi karo in qof wata aaladda iPhone 5s wixii ka dambeeya uusan waxqabad wanaagsan ku lahayn macruufka 9. Sidoo kale waxaan qaadaa fursad aan ku xasuusto in macruufka 9.1 uu wax badan ballan qaadayo, uguyaraan waqtigan xaadirka ah waa runti xasilloon iyo nidaam awood badan.
Xaqiiqdii fiidiyowga aan hayno waa mid sifiican wax u sawiraya, runti waa inaan nuqul ka qaadano amarada aan ka helno feylka "Readme" talaabo talaabo ah sida fiidiyaha oo kale, way kala maqanyihiin waxayna ku taxan yihiin faylka. Sidoo kale, waxay ku habboon tahay Linux iyo Mac OS. Ha iloobin inay lagama maarmaan tahay inaan soo dejino nooca iOS-ka ah ee aan rakibi doonno, IOS 8.4.1 ee .psw, tan waxaan ugu tagi doonnaa bogga GetiOS oo waxaan dooran doonaa macruufka 8.4.1 iyo aaladdayada. Markii ugu dambeysay Xiriirintan waxaad haysataa aaladda la heli karo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Casharrada iyo buugaagta » Sida hoos loogu dhigo iOS 9 ilaa iOS 8.4.1 oo lala socdo OdysseusOTA 2.0
Waxaan qabaa su'aal weyn: Waxaan haystaa Ipad 3 oo leh ios 8.4 (oo si xun u qaldan). Miyaan ku yareyn karaa qalabkan macruufka 8.4 ilaa iOS 7 SHSH la'aanteed, ama macruufka 6?
Runtii wax badan ayey iga yareyn laheyd
Xavi wax buu kajawaabay faalladaada… waxaan haystaa iPad-ka 9.0.2 waxaanan hoos ugu dhigayaa 8.4 waxaan doonayaa inaan ogaado haddii aan hadhow kala soo bixi karo iOS 6….
Iyo laga bilaabo iOS 9 ma loo gudbin karaa macruufka 7?
Jawaab ku bixi qoyska
Taasi waa waxa aan doonayo inaan ogaado, haddii ay suurtagal tahay in laga baxo macruufka 9 ilaa macruufka 7, ama xitaa macruufka 6.
Ma loogu talagalay kaliya mac iyo Linux? ma jiro nooc loogu talagalay daaqadaha?
Yordany Castillo dijo
sxb ma laheli kartid noocyo badan kaliya mida tilmaamaysa tan iyo markii baaritaanka lagu soo dajinayo macruufka 7 mana shaqeynayo hadana waqtigaan kaliya wuxuu u shaqeeyaa mac iyo linux waxay ka shaqeynayaan mid daaqadaha.
Jawaab Yordany Castillo
Waxaan ku hayaa macruufka 9.1 ee iPhone 5, ma hoos loogu dhigi karaa macruufka 8.4.1?
qadarin iphone dijo
saaxiib ma noqon kartid, waxaad kari kartaa oo keliya nooca 9.0.2.
Ujawaab qadarinta iphone
Oscar iPhone 5c dijo
Waad salaaman tahay, suurtagal ma tahay in hoos loo dhigo iPhone-ka illaa 9.0? Nidaamkan cusub? Laga soo bilaabo waxa aan arko waa inuu leeyahay Mac Yosemite! Mahadsanid
Jawaab Oscar iPhone 5c
Sideen ku rakibi karaa Linux oo hoos u dhigi karaa? 🙁 ama goorma ayaa loo sii deyn doonaa daaqadaha?
Iphone Esteban dijo
Qalabka ayaa hadda la cusbooneysiiyay si uu u taageero dhammaan moodooyinka iPhone 5, waxay ka shaqeynayaan inay taageeraan 4s iyo ipad 2 iyo 3.
Ku jawaab Esteban iphone
Esteban, waxaan hayaa ipad 3 oo waqtigaan la joogo waxa kaliya ee aan sameyn karo waa ka soo degsashada macruufka ilaa 9.0.2 ilaa 8.4.1?
Ma ogtahay haddii aan mar dambe kala soo bixi karo macruufka 6 isla qalabkaas?
Ama haddii uu jiro bog meesha laga raaco cusbooneysiinta qalabka ...?
ole qurux badan
Apple TV 3 wuxuu helayaa saddex kanaal oo cusub laga bilaabo maanta
Guitar Hero Live wuxuu gaarayaa App Store, laakiin wali kuma uusan joogin Spain